Fikradda Wanaagsan: Tamarta Maalgalinta Qoyska waxay ka caawisaa qoysaska inay bixiyaan biilasha shidaalka
"Qof kasta wuxuu rabaa in uu dareemo fiicnaan ku saabsan isticmaalida tamar badan oo la cusbooneysiin karo, laakiin haddii aad tahay qof dakhligoodu yar yahay, maaha inaad haysatid ikhtiyaarka ah inaad dhahdo 'Maalin maaliyadeed ayaan maalgashanayaa sababtoo ah waxay bixin doontaa 20 sano' "Ayuu yiri Brandy Toft, Agaasimaha Ku-xigeenka Deegaanka ee Leech Lake Band ee Ojibwe ee waqooyi-galbeed ee Minnesota. "Markaad dhibtoonayso, diiraddaada kaliya ayaa saaran sida aad u sameyneyso sanadkan."
Taasi waa sababta ay kooxdu ku biirtay ciidamada gobolka Minnesota, McKnight Foundation, iyo kuwa kale ee maalgeliya inay abuuraan beertii hore ee beesha caalamka oo dhan si ay uga faa'iideystaan beesha qabaa'ilka: $ 500,000, 200kw oo ah xirmooyinka qoraxda leh oo awood u leh inay kor u qaadaan 100 guri oo ku yaalla booska Leech Lake. La dhisay Alliance Energy Alliance, dooxada Leech waa miisaankii ugu horreeyay ee bulshada dakhliga hoose ee Minnesota, iyo ugu dambeyntii liiska dheer ee in ka badan 500 xalal qorraxda ah ee Backus, MN oo ah koox u doodista aan macaashka ahayn ayaa ku rakibay qarash la'aan qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee gobolka. Marka ay si buuxda u shaqeyso, RREAL waxay ku deeqi doontaa beerta qorraxda oo dib ugu celisa qabiilka si ay uga caawiso kharajka kharashka barnaamijka Caawinta Tamarta ee bulshada.
"Tamarta qorraxda waa in ay ahaataa mid aad u badan dad badan."
-JASON EDENS, MASUULIYE KALA DUWAN, ILAALINTA HOGAABIN KA QABO
Jason Edens, oo ah agaasimaha fulinta RREAL, oo aragto tamarta qoraxda ah oo qayb ka ah xalka ugu yaraan 33 milyan oo Mareykan ah oo ku nool "saboolnimada tamarta" qoysaska dakhliga soo wajahda biilasha shidaalka ee gubanaya ilaa shanaad ee dakhliga qoyska sanadka. Inkasta oo Caawimaadda Tamarta ay ka caawin karto qoysaska u qalma in ay buuxiyaan farqiga ujrada bixinta adeegga tamarta, oo lagu maalgeliyo fursadaha tamarta dib loo cusbooneysiin karo waxay caawin kartaa qoysaska dakhligoodu hooseeyo inay qiimaha shidaalku hoos u dhigaan halka ay si wanaagsan ugu soo noqdaan dakhliga dowladda. Dhab ahaan, 40kW oo kaliya oo ka mid ah albaabbada cadceedda ee ka hawl gala bakhaarada Leech Lake ee Bishii Noofember 2016-keliya hal-meelood ee qorshaha dhamaystiran -Toft wuxuu sheegayaa in qabiilku uu $ 100 u sameeyay barnaamijyada Kaalmada Shirkadaha Shidaalka ah.
Haddii beerta xayawaanka ee Leech Lake ay ku guulaysato, xalka qoraxda 'RREAL' waxay noqon kartaa tusaale u ah bulshooyinka kale ee la halgamaya nabadgelyo-darrada. Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee waqooyiga Minnesota ayaa sidoo kale ka caawin karta in qoysaska dakhligoodu hooseeyo ay ka soo horjeedaan isbedelka suuqyada ka yimaada shidaalka kale, sida yaraanta hareeraha ee qoysaska reer miyiga ah ee reer miyiga ah gaar ahaan adkaata xilliga qaboobaha sannadka 2014. "Qoysaska dakhligoodu hooseeyo ayaa ah kuwa ugu nugul marka suuqa cadaadis, "ayaa yiri Edens. "Ma saadaalin karno markii dhibaatada soo socota ay noqon doonto, laakiin waxaan dhihi karnaa nadiif nadiif ah ayaa ka soo horjeeda hubin la'aanta."